SocialBee: Qalabka Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiga Yaryar oo leh Adeegyada Concierge | Martech Zone
Sanado badan, waxaan hirgaliyay oo aan isku daray daraasiin baraha bulshada ah macaamiisha. Wali waxaan xiriir weyn la leeyahay qaar badan waxaadna sii wadeysaa inaad aragto anigoo kor u qaadaya aaladaha cusub iyo kuwa jira. Taasi waxay jahawareerin kartaa akhristayaasha… la yaabban sababta aanan si fudud ugu talin oo aan u riixo hal madal qof kasta. Anigu ma sameeyo sababtoo ah baahi kasta oo shirkad kastaa way ka duwan tahay midba midka kale.
Waxaa jira goobo badan oo warbaahinta bulshada ah oo caawin kara ganacsiyada… laakiin yoolalkaaga, istaraatijiyad, dhagaystayaasha, tartanka, habraacyada, kartida, miisaaniyada, wakhtiga, goobaha kale ee kaydintaada...dhammaantood waxa ay door wayn ku leeyihiin iibiyeyaasha oo aad sida ugu fiican uga heli karto soo celinta maalgashiga. Taasi waa sababta hadafku uu ku jiro sumadda Martech Zone waa cilmi-baaris, baro, oo ogaan. Ma kala saari karo xalal dalbashada halkaas ilaa aan ka fahmo ganacsigaaga. Midka saxda xal waayo ganacsigaagu waxa laga yaabaa inuu ka soo horjeedo waxa aan ku talin lahaa mid kale.
SocialBee: Loogu talagalay Solopreneurs, Meheradaha Yaryar, iyo Wakaaladaha u adeega
SocialBee waa madal lagu maamulo warbaahinta bulshada oo diiradda saarta abuurista nuxurka iyo wadaagista kanaalada bulshada. Shirkaddu waxay gaar u tahay in madalku la timaaddo tababaro iyo adeegyo xidhidhyo ikhtiyaari ah si ay u caawiyaan keli-taliyaasha, ganacsiyada yaryar, iyo wakaaladaha u adeega. Kaliya maaha inaad hesho goobta, laakiin waxaad sidoo kale ku dari kartaa khabiiro si buuxda u go'ay si ay kaaga caawiyaan abuurista macluumaadka, xayeysiiska, kobaca bulshada, iyo in ka badan.
Dulmarka SocialBee Platform
Wadaagista nuxurka waxay diiradda saartaa gudaha SocialBee runtii waa mid gaar ah, astaamaha waxaa ka mid ah:
Qaybaha nuxurka Baraha Bulshada - Qaybuhu waxay kaa caawinayaan inaad habayso qoraalada si aad u hesho macluumaad isku dhafan oo wanaagsan oo ku siinaya koontarool wanaagsan oo jadwalka, habeynta shabakad kasta, soo saarista kala duwanaansho, tafatir bulk, iyo dib-u-kuyuuga. Xitaa waad joojin kartaa ama socodsiin kartaa qaybo gaar ah.
Daabacaadda Warbaahinta Bulshada - u qaabee oo ku eegi fariimahaaga warbaahinta bulshada oo leh hashtag la kaydiyay profile ama madal. Goobtu sidoo kale waxay taageertaa emojis si ay u soo baxaan. Waxaad ku soo dejisan kartaa boosteejada CSV, RSS, Quuu, ama Pocket.
Isdhexgalka Warbaahinta Bulshada - ku daabac boggaga Facebook, boggaga iyo kooxaha. Ku daabac Twitter. Ku daabac boggaga LinkedIn iyo boggaga shirkadda. Ku dheji sawirada, carousels, ama fiidiyowyada Instagram. Ku dheji Google My Business.
Jadwalka Warbaahinta Bulshada - Arag jadwalkaaga, dheji waqtiyo gaar ah, qoraalada dhici doona ee la codsaday taariikh gaar ah ama ka dib tiro saamiyo ah. Jadwal gaar ah oo ku salaysan profile kasta.
email Notifications - lagu ogeysiiyo marka qoraaladu guuldarraystaan, marka soo dejintaadu dhammaato, ama marka safka qaybtaadu madhan yahay.
Falanqaynta - isku geynta URL-gaabaynta (Dib-u-cusbooneysii, Bitly, RocketLink, JotURL, Replug, PixelMe, BL.INK) iyo qayb-ku-saleysan Dejinta UTM si aad ula socoto waxqabadkaaga nuxurka
Buug A SocialBee Demo
Waa kan muuqaalka guud ee goobta:
Haddii aad adigu maamulayso istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada ama xeeladaha macaamiishaada, SocialBee waxay bixisaa tiro xirmo ah oo adeega warbaahinta bulshada ah bishii, oo ay ku jiraan:
Abuuritaanka Waxyaabaha Bulshada - Baraha bulshada waa qayb muhiim ah oo ka mid ah suuqgeyntooda, gaar ahaan haddii aad raadinayso inaad dareento oo aad dhisto wacyiga. Tallaabada ugu horreysa ee lagu dhisayo joogitaanka adag ee warbaahinta bulshada waa wadaagista tayada sare leh iyo waxyaabaha soo jiidashada leh si joogto ah.
Content Suuq - Abuuritaanka nuxurku wuxuu awood kuu siinayaa inaad dhisto xiriirro oo aad abuurto daacadnimo iyo kalsoonida macaamiishaada iyo rajadaada hadda. Intaa waxaa dheer, nuxurka si wanaagsan loo sameeyay ayaa soo saara taraafig ku socda mareegahaaga oo noqda qodob muhiim u ah geeddi-socodka jiilka hogaaminta.
Kobaca ku hawlan - Kobcinta 1-ka-1 xidhiidhada si aad u dhisto bulsho ku xeeran ganacsigaaga ayaa wax taraysa! Bulshadu maaha kaliya isha weyn ee jawaab celinta laakiin sidoo kale haddii si sax ah loo dhisay, waxaad u rogi kartaa dhagaystayaashaada inay noqdaan macaamiisha lacag-bixinta iyo hadhow u doodayaasha daacadda ah.
Qaadashada iyo Kordhinta - Dadaalka xayaysiisyada warbaahinta bulshada kaliya maaha inay kordhiyaan gaadhistaada waxayna awood kuu siinayaan inaad fariintaada la wadaagto dhawr kanaal, laakiin sidoo kale waxay ku habboon yihiin miisaaniyad kasta waana fududahay in la cabbiro. Intaa waxaa dheer, waxaad heli kartaa shuruudo bartilmaameed gaar ah.
Iyo, haddii aad u baahan tahay xoogaa caawimaad ah markaad bilowdo, SocialBee waxay ku siinaysaa xirmo lacag-filan si loogu haajiro dhammaan macluumaadkaaga SocialBee ama waxaad raadineysaa inaad bilowdo cusub, waxaan kaa caawin karnaa dejinta bilowga ah. Laga soo bilaabo u wareejinta dhammaan macluumaadkaagii iyo dejintii hore oo dhan SocialBee, si aad jadwal kuu diyaariso, annaga waad nagu kalsoonaan kartaa!
Wax badan ka baro Adeegyada SocialBee
Bixinta: Anigu waxaan ku xiran ahay SocialBee oo waxaan adeegsanayaa xiriiriyeyaal ku xiran qodobkaan.
Tags: wax yarBL.INKUContent Suuqadeegyada suuqgeynta nuxurkacsv ee baraha bulshadaFacebookKooxda FacebookDaabacaada kooxda Facebookfacebook pageDaabacaada bogga FacebookAstaanta Facebookgoogle ganacsigeygagoogle daabacaadda ganacsigaygaInstagramdaabacaadda instagramJotURLlinkin bogga shirkaddalinkin daabacaadda bogga shirkaddaPixelMejeebkaquuuIsweydaarsiDib u celiRocketLinkRSSganacsiga yaryarwakaalada ganacsiga yar yarxayaysiinta warbaahinta bulshadaabuurista nuxurka warbaahinta bulshadakobaca warbaahinta bulshadaisdhexgalka bulshadadaabacaadda warbaahinta bulshadajadwalka warbaahinta bulshadaadeegyada warbaahinta bulshadaistiraatiijiyadda warbaahinta bulshadatababarka baraha bulshadasocialbeeTwittergaabin url
WP Dhammaan Soo Dejinta: Sida Badan Looga Soo Dejiyo Qaybta Cashuuraha ee WordPress ee CSV